Zụta Poco F2 Pro: ihe mere ị ga - eji mee ya mgbe ọ dabara na ahịa | Gam akporosis
Nyaahụ anyị mara ọkwa na mbata nke titan ohuru site na enyemaka nke Xiaomi. Ọ bụrụ Obere F2 Pro Ọ bụrịị onye ọrụ gọọmentị, ihe nlere nke na-abata ghọrọ onye ọhụụ ọhụrụ. Ngwá agha ha? A mara mma nke ukwuu, na mgbakwunye na atụmatụ ndị na-ebuli ya elu na mpaghara ahụ. Lezienụ anya, ihe a niile na ụgwọ mbibi.
Ma ọ bara uru n'ezie zụta Poco F2 Pro? Still ka na-eche na ị nwere ike ịchọta ngwọta ka mma, ma ọ bụ na flagship nke ụdị dị ka Samsung ma ọ bụ Huawei bara uru ịzụta.
1 Egbula azụ ịzụta Poco F2 Pro ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị egwuregwu
2 Nnukwu batrị
3 Ego asịrị, isi ihe mere ị ga-eji zụta Poco F2 Pro
Egbula azụ ịzụta Poco F2 Pro ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị egwuregwu
Ndị enyemaka Xiaomi ahụ lebara anya ọbụna ntakịrị nkọwa iji mee ka ọdịiche dị na ndị ya na ya na-azọ. Otu n'ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị na-abịa na sistemụ mmiri jụrụ ya. Ee, Poco F2 Pro na-akụ na ngwaike kachasị mma n'ahịa. Nsogbu bụ na iji egwuregwu na-aga n'ihu na-achọ nnukwu ibu ọrụ, karịsịa na njedebe nke nwere ahụ nke aluminom, nwere ike ịbụ oge bọmbụ.
Ma Pocophone achọtawo azịza ya: usoro zuru ezu nke mmiri mmiri friji, nke ọtụtụ graphite na-akwado, nke na-enye ohere ka ekwentị ghara ịta ahụhụ site na nsogbu kpo oku. N'ụzọ dị otu a, ịnwere ike igwu egwu Fortnite ruo ọtụtụ awa na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọzọkwa, ịhụ njikwa teknụzụ Site na ọnụ ọgụgụ a, o doro anya na ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Poco F2 Pro iji kpọọ egwuregwu, ọ gaghị emechu gị ihu ma ọlị.
IKIRU 6.67-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi zuru ezu HD + - ọnụego nlele 180 Hz - ntaneti 1.200 - HDR10 + - Gorilla Glass 5
Nhazi 865-isi Snapdragon 8
Ohere TERLỌ N'IME 128/256 GB UFS 3.0
GHARA CAMERAS 686 MP Sony IMX64 isi ihe mmetụta - MP MP Telemacro 5 MP - Ihe mmetụta 2 MP Omimi
N'ihu CAMERA 20 MP na mmapụta usoro
UMUAKA 4.700 mAh na 33W ngwa ngwa
OS Android 10 na Poco Launcher 2.0 interface
Njikọ 5G - WiFi 6 - Super Bluetooth 5.0 - GPS abụọ - USB-C - NFC - Obere jaak - IR Blaster
Atụmatụ ndị ọzọ Na - agụ akara mkpisiaka - Liquid jụrụ oyi
Mana n'ezie, kedụ ihe ojiji dị ike ma ọ bụrụ na ọnụ ya agaghị anọ m ogologo ụbọchị niile? Nke a bụ ebe ihe nke abụọ kpatara na ịzụrụ Poco F2 Pro bụ ihe ịga nke ọma.
Dịka ị pụrụ ịhụ n ’onyogho nke na - ahụ ahịrị ndị a, onye nrụpụta Eshia ahọrọla usoro maka ya 4.700 mAh, karịa iji nye ikike nnwere onwe dị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ihuenyo PocoPhone F2 Pro nwere mkpebi Full HD +, nke na-echekwa ihe onwunwe ma e jiri ya tụnyere ogwe QHD.
Na ihe banyere mbata nke gam akporo 10, nke budata melite arụmọrụ ike, agbakwunye na njikwa akụ zuru ezu nke Snapdragon 865 processor nyere, ha na-eme mmanya zuru oke ka batrị Poco F2 Pro nwee ike ịnọ ruo ụbọchị abụọ. Nnukwu nkọwa nke na-eme ka ihe dị iche jiri ya tụnyere ndị ya na ya.
Ego asịrị, isi ihe mere ị ga-eji zụta Poco F2 Pro
Iberibe achicha nke ihe di gburugburu bu onu ahia ya. Na, ị nwere ike ịzụta Poco F2 Po na 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa naanị 549 euro. Ee, enwere n'ezie nkwalite nke na-agwụ na May 15 ma na-enye gị ohere ịchekwa euro 50, mana ọ ka bụ ego mkpofu.
Cheta na ihe nlere a nwere nkwado maka netwọk 5G, ma hụ njirimara ọrụaka ya, o doro anya na Poco F2 Pro bụ njedebe na ndụ bara uru nke opekata mpe 3 ma ọ bụ 4 afọ. Yabụ, n'ịhụ na n'ime ọnụahịa ahụ, ọ nweghị onye ọ bụla na-abịaru ya nso na arụmọrụ, o doro anya na ịzụta ọdụ a agaghị abụ mmeghe. Kedu ihe dị iche na Samsung Galaxy S20 dịka ọmụmaatụ? Tumadi mkpebi nke ihuenyo, wireless Nchaji, mmiri na-eguzogide na foto ngalaba.
Na mgbakwunye, na-eburu n'uche na na Spain ihe nlereanya ahụ na ihe nhazi Exynos abịarute, ihe na-erughị ọla dị na okpueze Qualcomm, ọ bụ eziokwu na Poco F2 Pro ga-enye arụmọrụ ka mma ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Ihe 3 iji zụta Poco F2 Pro
4 magburu onwe uzo ozo ka Microsoft SwiftKey kiiboodu